Our ¬oor mounted steel casework is the lab furniture of tomorrow. It is exible and allows in nite modi cations at site witha“sliding knee space” concept. Construction uses electrogalvanised steel sheets with heavy epoxy powder coating. Quality hinges, door handles and drawer pulls lend to durability and years of trouble free use. We stock both epoxy and phenolic resin table tops to ensure quick ship possibilities to our ever growing export division. ဓာတ်ခွဲခန်းပရိဘောဂများကို customers များ၏ လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းပေးသည့်အနေဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပြီး လက်ကိုင်၊အံဆွဲ အားလုံးတို့ကို သံချေးမတက်စေရန်ပြုလုပ်ထားကာ ကြာရှည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။အရည်အသွေးကောင်းမွန်ခြင်း၊ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေခြင်း စသည့်အကျိုးကျေးဇူးတို့ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။အရည်အသွေးမြင့်မားသော Laboratory Furniture များကို ဆက်သွယ်ဝယ်ယူလိုသော လူကြီးမင်းများအနေဖြင့် Advance Lab Scientific &amp; Engineering Co.,Ltd တွင် Customers များ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဈေးနှုန်းမှန်ကန်စွာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
from exposure to harmful fumes.Fume hoods are essentiall aerodynamic scavenging devices that remove dangerous fumes fromalaboratory and expel it into the environment where it is suciently diluted to no longer poseahealth risk. အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော Laboratory Furniture များကို Advance Lab Scientific &amp; Engineering Co.,Ltd တွင် Customers များ စိတ်တိုင်းကျ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ရွေးချယ်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
A box that gives you an ideal space for sample preparation. UV light can be used to deactive DNA and / or RNA between experiments.UV light with timer.Foldable front cover.Polycarbonate construction to prevent,UV damage,Lab grade work top.Germicidal lamps e
erent sizes, shapes and ultraviolet ray output so that the most appropriate one can be selected according to the purpose.The lamps are primarily useful for sterilization of air, the surfaces of various materials and water or liquid. အရည်အသွေးမြင့်မားသော Laboratory Furniture များကို ဆက်သွယ်ဝယ်ယူလိုသော လူကြီးမင်းများအနေဖြင့် Advance Lab Scientific &amp; Engineering Co.,Ltd တွင် Customers များ စိတ်တိုင်းကျ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဈေးနှုန်းမှန်ကန်စွာရွးချယ် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
Wet scrubbers are designed to remove water-soluble compounds from exhaust streams. Advancelab manufactures two types: MiniLab-aclosed system comprising ofascrubber unit mounted above the fume hood andaholding tank below.MaxiLab-astand-alone unit that can be remotely located.MiniLab can be utilised for individual hoods only. They allow exibility and are convenient to install.MaxiLab can be used foraseries of hoods and are available in two sizes for this application.Units can be manufactured in PVC or PP sheet utilizing “hot weld” fabrication. All units come withachemical resistant pump,sanitary and water connections andaskid . MINILAB, MAXILAB 1000 ,MAXILAB 2000 စသည့်Model (၃)မျိုးခွဲထားပြီး အရည်အသွေးမြင့်မားသော Laboratory Furniture များကို ဆက်သွယ်ဝယ်ယူလိုသော လူကြီးမင်းများအနေဖြင့် Advance Lab Scientific &amp; Engineering Co.,Ltd တွင် စိတ်တိုင်းကျ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ၊ဈေးနှုန်းချိုသာစွာရွေးချယ် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
ဆေးရုံဆေးခန်းများအတွက် ကုတင်ဆိုတာ မရှိမဖြစ် အရေးပါတဲ့ အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုပါ။ ဒီလို အရေးပါတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခု ဟာ အရည်သွေးမမှီ မကြာခဏလဲလည်နေရမှာမို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား ။ Paramount Bed တွေနဲ့ စမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါ။ ကွာခြားမှုကို သိရှိနိုင်မှာပါ။ နှစ်ကာလ ရှည်ကြာစွာ ထိန်းသိမ်းလာတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ ရဲ့ Quality Control ကြောင့် ပစ္စည်းတိုင်းဟာ စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အ၀ပေးနိုင်မှာပါ။ မိမိနဲ့ သင့်လျော်တဲ့ ကုတင် အမျိုးအစားကိုလဲ ဆွေးနွေးရွေးချယ် ပြီး ၀ယ်ယူနိုင်နေပြီမို့ ခုပဲဆက်သွယ်လိုက်ကြရအောင်။ ပစ္စည်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလာရောက်လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Concordia Myanmar ( Yangon ) MICT Park ၊ အဆောက်အဦး (၁၁) ၊ Myanmar Info Tech ၊ လှိုင်တက္ကသိုလ်ဝင်း ၊လှိုင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် ။ ဖုန်း - 01 654951 /52/53/54/55/56/57/58 Mobile – 09 43089036 , 09 421744546, 09
ယခုမိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ တွန်းလှည်းကတော့ ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းများတွင် အသုံးများသော Stainless Steel တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခိုင်ခံပြီး အကြမ်းခံအောင် Steel စစ်စစ်များဖြင့်ဖန်တီး ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အရည်အသွေးကို ၁၀၀% အပြည့်အဝ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်နှင့် ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းရှိသောကြောင့် အသုံးပြုရအဆင်ပြေသည်။ အဆင့် ၃ ဆင့်ပါသောကြောင့် ပစ္စည်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နှင့် သေသေသပ်သပ် ထားသိုနိုင်သည်။ ဆေးရုံ၊ဆေးခန်း နှင့် Buty Spa များတွင် အသုံးများသည့် တွန်းလှည်းအမျိူးအစားဖြစ်သည်။ ဘီးတပ်ထားသောကြောင့် သွားလေရာ အလွယ်တကူတွန်းယူလို့ရပါတယ်။ ကြာရှည်အသုံးခံပြီး သံချေးတက်ခြင်းကို တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသော Customer များအနေဖြင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်း ဝယ်ယူနိုင်သည်။ အားပေးမှုကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။